Zawgyi Keyboard for Nokia (Symbian) – Myanmar Mobile App Edition: Myanmar | ပြည်တွင်းပြည်ပမုိုဘိုင်းသတင်းများ
Published On: Wed, Mar 13th, 2013 မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင်ရာ Tutorials | By သက်နိုင်စိုး Zawgyi Keyboard for Nokia (Symbian)
Tags ShareNokia Zawgyi Keyboard ပို့စ်အား နွယ်ရိုး Blog မှကူးယူဖော်ပြပါသည်။ မ​င်္ဂ​လာ​ပါ
Symbian သုံး​ဖုန်း​ဖြစ်​တဲ့ Nokia ဖုန်း​တွေ​မှာ ဇော်​ဂျီ​ကီး​ဘုတ်​အ​သစ် ရ​ပါ​ပြီ။ အ​စော​ပိုင်း​က​တော့ Opera Mini မှာ မြန်​မာ​လို မြင်​ရ​အောင် လုပ်​ထား​ကြ​တော့ Web Text Editor လေး​နဲ့ Opera Mini ထဲ​မှာ​ပဲ ဇော်​ဂျီ​ကို ရိုက်​လို့​ရ​အောင် လုပ်​ခဲ့​ပါ​တယ်။ ဒါ​ပေ​မယ့် ကျွန်​တော် Responsive အ​နေ​နဲ့ မ​ရေး​ခဲ့​တော့ ဖုန်း​အ​နေ​အ​ထား​ပေါ်​မူ​တည်​ပြီး အ​ဆင်​မ​ပြေ​ဖြစ်​တာ များ​ပါ​တယ်။
ဟိုး အ​ရင်​က​လည်း Nokia ဖုန်း​တွေ​အ​တွက် ကီး​ဘုတ်​တစ်​မျိုး ထွက်​ခဲ့​ပါ​သေး​တယ်။ ဒါ​ပေ​မယ် ထည့်​ဖို့​ရာ သိပ်​အ​ဆင်​မ​ပြေ​ပါ​ဘူး​။ ဖုန်း​ကို Hack ထား​မှ ထည့်​လို့​ရ​ပါ​တယ်။ Hack ထား​ရင်​တောင်​မှ မူ​လ​ရှိ​ပြီး​သား ကီး​ဘုတ်​နေ​ရာ​မှာ အ​စား​ထိုး​ခွင့် မ​ပေး​တာ​မျိုး​လည်း ရှိ​ပါ​တယ်။
ယ​ခု​နည်း​က​တော့ ကျွန်​တော် တ​ရုတ်​ဆော့​ဖ်​ဝဲလ် Baidu Input ရဲ့ Skin ကို​သာ ဆွဲ​ထား​တာ ဖြစ်​တဲ့​အ​တွက် ဖုန်း​ကို Hack ထား​ဖို့​လည်း မ​လို​ပါ​ဘူး​။ Baidu Input ဆော့​ဖ်​ဝဲလ်​ကို​သွင်း​ပြီး ကိုယ်​ဆွဲ​ထား​တဲ့ ဇော်​ဂျီ​ကီး​ဘုတ် Skin ကို ၎င်း Baidu Input မှာေ​ရွး​ပေး​လိုက်​ရုံ​ပါ​ပဲ။
ထည့်​သွင်း​နည်း​လို​အပ်​သော File များ​ကို Download လုပ်​လိုက်​ပါ။ အောက်က link မှာရယူပါ။
ပြီး​နောက် Memory ထဲ​သို့ ကူး​ထည့်​ပါ။
Zip တွင် Password ပါ​ခဲ့​ပါ​က nweyoe ဖြစ်​သည်။
အ​ဆင့် ၁ ။ ။ Baiduinput_symbian3_v5_v3.1_1000e.sisx ကို ဖုန်း​ထဲ​၌Install လုပ်​ပါ။
အ​ဆင့် ၂ ။ ။ C:\_baidu\_input\_touchskin ထဲ​သို့ Zawgyi-Keyboard.bds ကို Copy ကူး​ထည့်​ပါ။ ဒီ​တိုင်း​ထည့်​မ​ရ​လျှင် X-plore ကို​သုံး​၍​ထည့်​ပါ။ X-plore အ​ကြောင်း ဤ​နေ​ရာ​တွင် ရှင်း​ပြ​မ​နေ​တော့​ပါ။ )
ဒီ​အ​ဆင့်​ထိ​က​တော့ ဆော့​ဖ်​ဝဲလ်​ထည့်​ခြင်း ပြီး​ပါ​ပြီ။
ဇော်​ဂျီ​ကီး​ဘုတ် ပြောင်း​နည်း​Application Menu ထဲ​မှ Du ဆို​သော Icon လေး​ကို ဖွင့်​ပါ။ တ​ရုတ်​လို​တွေ ပေါ်​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ်။
နံ​ပါတ် ၁ ကိုေ​ရွး​ပါ။
နံ​ပါတ် ၁ ကိုေ​ရွး​ပြီး​လျှင် အ​ပေါ်​ဆုံး​တစ်​ခု​ကိုေ​ရွး​ပါ။ နောက်​တစ်​ခု တက်​လာ​လျှင် အ​ပေါ်​ဆုံး​တ​ရုတ်​စာ ပါ​တာ​ကိုေ​ရွး​ပါ။ AknFEP သည် မူ​လ ကီး​ဘုတ်​ဖြစ်​သည် )
နံ​ပါတ် ၄ ကိုေ​ရွး​ပါ။
နံ​ပါတ် ၄ ကိုေ​ရွး​ပြီး​လျှင် အ​ပေါ်​ဆုံး​တစ်​ခု​ကိုေ​ရွး​ပါ။
ပုံ​စံေ​ရွး​ခိုင်း​ပါ​လိမ့်​မည်။ ဒု​တိ​ယ Tab ကို​သွား​ပါ။ Baidu-Zawgyi-Keyboard ကိုေ​ရွး​နှိပ်​လိုက်​ပါ။ Popup တက်​လာ​လျှင် အ​ပေါ်​ဆုံး တစ်​ခု​ကိုေ​ရွး​ပေး​ပါ။ ဒု​တိ​ယ​တစ်​ခု​သည် ထည့်​ထား​သော Skin ကို Delete လုပ်​ခြင်း​ဖြစ်​သည်။ )
အ​ဆင့်​ဆင့် Back ပြန်​သွား​၍ ထွက်​လိုက်​ပါ။
Message မှာ စာ​ဝင်​ရိုက်​ကြည့်၊ ကီး​ဘုတ်​ပေါ်​က အ​င်္ဂ​လိပ် အ​လံ​လေး​ကို​နှိပ်​ကြည့်​ပါ​ဦး​။ စာ​ရိုက်​မ​ရ​သေး​ပါ​က ညာ​ဖက် အ​ပေါ်​ဆုံး​ရှိ တ​ရုတ်​စာ​ကို နှိပ်​ပါ။ Horizontial ကိုေ​ရွး​လိုက်​ပါ။​ဇော်​ဂျီ ကီး​ဘုတ် ပေါ်​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ်။
ရိုက်​နည်း​က​တော့ ပုံ​မှန်​အ​တိုင်း​ပါ​ပဲ။ ပါဌ်​ဆင့်​တွေ​ကို​တော့ မူ​ရင်း​စာ​လုံး​နေ​ရာ​တွေ​မှာ ထည့်​ထား​ပါ​တယ်။ ဥ​ပ​မာ ဆ ရဲ့ ပါဌ်​ဆင့်​ကို​ရိုက်​မယ်​ဆို​ရင် ဆ ကို​ဖိ​ထား​လိုက်​ရုံ​ပါ။
အို​ကေ စာ​တော့ ရိုက်​လို့​ရ​သွား​ပါ​ပြီ။ စာ​ရိုက်​ဖို့​အ​တွက် ကီး​ဘုတ် သတ်​သတ်​ပါ​ပဲ။ Font ကို​မြင်​ရ​ဖို့​က​တော့ Font Zoomer လို​မျိုး Font ပြောင်း​တဲ့ ဆော့​ဖ်​ဝဲလ်​သုံး​ပြီး ပြောင်း​ပါ။ Zawgyi Font ပြောင်း​လိုက်​လျှင် ဖုန်း​ထဲ​၌ တ​ရုတ်​စာ မြင်​ရ​တော့​မည် မ​ဟုတ်​ပါ။
Baidu ထဲ​မှ နံ​ပါတ် ၄ ကို ပြန်​နှိပ်​ပြီး နောက်​ခံ​များ ပြောင်း​လဲ​နိုင်​ပါ​တယ်။ ပို​၍​သပ်​ရပ်​သော ကီး​ဘုတ်​လေး ရ​ပါ​လိမ့်​မယ်။
ကဲ ပို​ရှင်း​သွား​အောင် FAQ လေး ဆက်​ဖတ်​လိုက်​ပါ​ဦး​။
မေး​။ ။ ဇော်​ဂျီ​ကီး​ဘုတ်​အ​ပြင် ဘာ​ကီး​ဘုတ်​တွေ ပါ​သေး​လဲ။
ဖြေ။ ။ အ​င်္ဂ​လိပ်​ပါ​မယ်၊ တ​ရုတ် Pinyin ပါ​မယ်။
မေး​။ ။ ကီး​ဘုတ်​တော့ မြင်​ရ​ပြီ ဒါ​ပေ​မယ့် ရိုက်​လိုက်​ရင် လေး​ထောင့်​တုန်း​တွေ​ပဲ ပေါ်​တယ်။ ဘာ​ဖြစ်​လို့​လဲ။
ဖြေ။ ။ ဟုတ်​ကဲ့။ ဒါ​က ကီး​ဘုတ်​သတ်​သတ်​ပါ​ပဲ။ Font ကို​မြင်​ချင်​ရင် Font Zoomer လို Font ပြောင်း​ပေး​တဲ့ Software တစ်​မျိုး​ကို​သုံး​ပါ။ Font Zoomer ကိုတော့အောက်က link ကနေရယူလိုက်ပါ။
အဲ​ဒါ​ဆို​ရင် ဖုန်း​တစ်​ခု​လုံး​မှာ မြန်​မာ​လို ရိုက်​လို့​ရ​သွား​ပါ​ပြီ။ ဒါ​ပေ​မယ့် စာ​လုံး​ထပ်​ပြီး မ​သပ်​မ​ရပ် ဖြစ်​တဲ့ ပြ​ဿ​နာ​တော့ ရှိ​ပါ​တယ်။
မေး​။ ။ တ​ရုတ်​ဆော့​ဖ်​ဝဲလ်​ကို ပြန်​ပြင်​ထား​တာ​ဆို​တော့ Error များ ရှိ​နိုင်​မ​လား​၊ Master Reset ချ​မှ ပြန်​ဖြုတ်​လို့ ရ​တာ​မျိုး​ပေါ့​။
ဖြေ။ ။ မ​ရှိ​ပါ​ဘူး​။ ဖြုတ်​ချင်​ရင် Baidu Input ကို အ​လွယ်​တ​ကူ​ပဲ ပြန်​ဖြုတ်​နိုင်​ပါ​တယ်။ မူ​လ​ကီး​ဘုတ် (AknFEP ကို Baidu Input ထဲ​မှာ ပြန်ေ​ရွး​ပြီး​ရင်​ပေါ့​။
မေး​။ ။ Contact နာ​မည်​ပြောင်း​တာ​တွေ၊ Message ပို့​တာ​တွေ​မှာ စာ​လုံး​တွေ မ​သပ်​မ​ရပ်​ဖြစ်​တာ​မျိုး​နဲ့ စာ​လုံး​ထပ်​တာ​တွေ​ရှိ​ပါ​တယ်။ အ​မှန်​အ​တိုင်း သပ်​သပ်​ရပ်​ရပ်​မြင်​အောင် ဘယ်​လို​လုပ်​ရ​ပါ​မ​လဲ။
ဖြေ။ ။ ဇော်​ဂျီ​မှ မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး​။ အ​ခြား မြန်​မာ Font တွေ​ထည့်​လည်း ဖြစ်​ပါ​တယ်။ အ​ခု​တွေ့​ရ​သ​လောက်​က​တော့ Symbian ဖုန်း​ထဲ​မှာ မြန်​မာ​စာ​ကို သပ်​သပ်​ရပ်​ရပ်​နဲ့ အ​မှန်​အ​တိုင်း မြင်​နိုင်​တာ Vibar ထဲ​မှာ​ရယ်၊ Nokia Car Mode မှာ​ရယ်၊ Blob ဆို​တဲ့ Blogger and WordPress Client ထဲ​မှာ​ရယ်​ပါ​ပဲ။
မေး​။ ။ ဒီ​ကီး​ဘုတ်​ကို ပို​ကောင်း​အောင် လုပ်​ဖို့​ရှိ​ပါ​သ​လား​။
ဖြေ။ ။ ဟုတ်​ကဲ့​ဗျာ၊ ဒီ​ကီး​ဘုတ်​ရယ်​မှ မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး​၊ အ​ခြား​သော အ​ဆင်​ပြေ​တာ​မျိုး​တွေ့​ရင်​လည်း လုပ်​ဖြစ်​ဦး​မှာ​ပါ​ပဲ။
မေး​။ ။ အဲ​ဒီ​လို​မျိုး Skin ကို ကိုယ့်​တိုင်း​ကိုယ် လုပ်​ကြည့်​ချင်​တယ်။ ရ​နိုင်​ပါ့​မ​လား​။
ဖြေ။ ။ ရ​တာ​ပေါ့​ဗျာ။ စိတ်​ပါ​လို့ လုပ်​ချင်​တယ်​ဆို​ရင် http://shouji.baidu.com/input/ ကို​သွား​ပါ။ လို​အပ်​တဲ့ ဆော့​ဖ်​ဝဲလ် Baidu Input ရဲ့ Skin ပြောင်း​တဲ့ ဆော့​ဖ်​ဝဲလ် ကို Download လုပ်​ပါ။ ကိုယ့်​တိုင်း​ကိုယ် ပြု​ပြင်​တီ​ထွင်​နိုင်​ပါ​တယ်။
ကဲ ကျွန်​တော်​မေး​ပြီး ကျွန်​တော်​ဖြေ​ထား​တာ​လေး ဖတ်​ပြီး​ရင်​တော့ သ​ဘော​ပေါက်​လောက်​ပါ​ပြီ​နော်။
စမ်း​သပ်​ပြီး​ဖုန်း​များ​Nokia 5800 , Nokia C7-00 (Symbian Belle , Symbian 3)
နွယ်​ရိုး​၂​၂ / ၂ / ၂​၀​၁​၃
Nokia Zawgyi Keyboard ပို့စ်အား နွယ်ရိုး Blog မှကူးယူဖော်ပြပါသည်။ Credit: http://www.nweyoe.net/blog/new-nokia-zawgyi-keyboard/
26 comments on “Zawgyi Keyboard for Nokia (Symbian)”	ညိမင်း on March 14, 2013 at 2:37 am said:
symbian s6700 ကို myanmarfont ထည့်လို့ရမလား ခင်ဗျ ထည့်လို့ရမယ်ဆို၇င် ကူညိပေးပါဥိးနော်
Reply ↓	sai ounghing on March 14, 2013 at 3:20 am said:
HUAWEI mediapad10 FHD 4.0.4 ROOT လုပ်ချင်လို့ပါ လုပ်လို့၇၇င်တင်ပေးပါဦး….
Reply ↓	phonesoftware555 on March 14, 2013 at 4:07 am said:
nokia N700 myanmar font လုပ်နည်းလေး ကူညီပေးပါအုံး
Reply ↓	si thu on March 14, 2013 at 5:08 am said:
Thanks billion for your sharing. It is really working in my nokia phone.
Reply ↓	aungkomin on March 14, 2013 at 5:33 am said:
Reply ↓	johnniehero25 on March 14, 2013 at 5:46 am said:
Font Zoomer ထဲဝင်ပြောင်းရသေးလား ဘာပြောင်းရတာလဲ အကို
Reply ↓	frankie on March 14, 2013 at 6:01 am said:
nokia lumia 800 မှာ မြန်မာဖောင့် ရပြီလား အကို
Reply ↓	flame on March 14, 2013 at 6:25 am said:
help me! my phone 5800
i do all the step above shown!
but i can’t use zawgyi key board!
when i select the zawgyi’s skin… it’s blank & appear like shirt!
then nth change! Reply ↓	သိန်းဇော် on March 14, 2013 at 7:17 am said:
ဟ အကိုရေကျွန်တော့ရဲ.နှစ်ရှည်လများ(မြန်မာစာ)မရလို.ပစ်ထားတဲ့ nokia (500)မှာတော့လုံးဝအဆင်ပြေသွားပြီး font ကတော့အစကတည်းကျွန်တော် fontzoomer နဲ.ထည့်ထားလို.ထည့်စရာမလိုတော့ဘူး ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာ ကျွန်တော့် iphone မှာမြန်မာစာထည့်လို.ရတုန်းကတောင်မှဒီလောက်မပျော်ဘူး အောက်နားကကိုယ့်ဟာကိုမေးပြီးကိုယ့်ဟာကိုပြန်ဖြေထားတာလေးလည်းရီချင်တယ် ……ဟင်းဒီလောက်ခက်တဲ့ symbian ဘာတတ်နှိုင်သေးလဲ…..
Reply ↓	ုkokolin on March 14, 2013 at 10:06 am said:
ကျနော့် nokia C6 01 မှာ install လုပ်လို့မရဘူးဗျ sis က certificate errorဖြစ်နေတယ်ဗျာ
Reply ↓	Oo Guna on March 15, 2013 at 3:09 am said:
ကျေးဇူးတင်တယ်ဟေ့….အရမ်းခံပြင်းနေတာ.ဒါကိုဘာလို့မရတာလဲဆိုပြီးတော့လေ.ခုတော့ တော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားပါပြီ…N8 မှာပါ…ဆက်ပြီး အောင်မြင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်…
Reply ↓	zaw win latt on March 16, 2013 at 3:47 am said:
sony ericson u5iမှာကော myanmar font ထည့်လို့ ရလား
Reply ↓	kyawnyinyihein on March 16, 2013 at 5:45 am said:
ကီးဘုတ် တော့ ပေါ်တယ် စာရိုက်ရင်ဖောင့် မမြင်ရဘူး ဘာလိုနေလို့လဲမသိဘူးကူညီပေးပါဦး nokia5800 မှာ ပါ
Reply ↓	thet zon phue wai on March 16, 2013 at 6:03 am said:
font zoomer ကဘယ်လိုပြန်ပြောင်းရမှာလဲ ဘယ်လိုသုံးရမှာလဲပြောပြပေးပါဦးရှင့်
Reply ↓	Koaunggyi on March 16, 2013 at 3:28 pm said:
nokia 5800 မှာ အကိုပြောသလိုကီးဘုတ် ထည့်ပီးသွားပါပီ။ ဒါပေ့မယ် အင်္ဂလ အလံမပါဘူး. မြန်မာကီးဘုတ်ကို ပြောင်းလို့မရဘူးဖြစ်နေပါတယ် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် အကို ပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာ။
Reply ↓	Thurawannatun on March 16, 2013 at 3:39 pm said:
Nokia x6 အတွက်မြန်မာဖောင့်ထည့်နည်းလေးပြောပေးပါဦး။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Reply ↓	wiya on March 16, 2013 at 6:07 pm said:
Download မရလို link လေးပြန်တင်ပေးပါလား
Reply ↓	brangmai/time on March 18, 2013 at 8:44 pm said:
Reply ↓	Mg Mg on March 22, 2013 at 11:59 am said:
nokia E71 မှာယော အသုးံပြုလုပ် ရလားမသိဘူး touch တော့မဟုတ်ဘူး
Reply ↓	kozaw on March 24, 2013 at 3:42 am said:
nokia-303ကို မြန်မာစာရအောင် ကူညီပေးပါအကို
Reply ↓	beat on March 30, 2013 at 8:13 am said:
huawei T8620 root လုပ်နည်းတင်ပေးပါဗျာ..
Reply ↓	nyilin on April 20, 2013 at 1:53 am said:
အကိုရေ ကျနော်ကို ကူညီပါဦးခင်ဗျာ ကျနော်ဖုန်းမှာ မြန်မာဖောက်ရှာမရလို ဖြစ်နေတယ် nokia 500(java)ဖုန်းမျိုးစားဖြစ်တယ် ကျနော်ရှာတယ် အဆင်ပြေဘူး ကျနော်ကိုကူညီစေချင်ပါတယ် ….။
Reply ↓	khon zaw thu on April 26, 2013 at 2:22 pm said:
Reply ↓	khon zaw thu on April 26, 2013 at 2:27 pm said:
Java အမျိုးအစားရှိလျှင် အတိပေးပါ အကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Reply ↓	myo thura on May 16, 2013 at 2:09 am said:
Reply ↓	kyawzayya on May 19, 2013 at 3:59 am said:
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကိုရေ/Nokia 5800 မှာပါ၊keyboard လိုက်ရှာနေတာကြာပါပြီ။
Font ကိုတော့ Mobile9.com က symbianmya_84jv4lnb.sisx ကို down ပါတယ်။
kyawzayya on Zawgyi Keyboard for Nokia (Symbian)painsoe on Frozen Keyboard Pro v0.5.1 for Androidspider on Viber For Windows XP/7/ 8 & Mac OS Xspider on Viber For Windows XP/7/ 8 & Mac OS XYanlin Aung on HUAWEI Y220T ROOT လုပ်နည်း Android Development